မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲများက ရိုဟင်ဂျာ ကျေးရွာများသို့ ဝင်စီးပြီး စိတ်တိုင်းကျ ကျူးလွန်နေ - ရိုဟင်ဂျာ ဗီးရှင်း မြန်မာပိုင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဗီးရှင်း မြန်မာပိုင်း
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲများက ရိုဟင်ဂျာ ကျေးရွာများသို့ ဝင်စီးပြီး စိတ်တိုင်းကျ ကျူးလွန်နေ
၂၁ . ၀၈ . ၂၀၁၇
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း အမှတ် (၄) နယ်မြေ၊ စခန်း အမှတ် (၂၄) မှ စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး မင်းကြီးကျေးရွာ (ခ) တူလာတူလီကျေးရွာအုပ်စုသို့ ဝင်စီးပြီး ကျေးရွာကို ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာ ရွာသားများကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ နေအိမ်များ ဖြိုဖျက် ဖျက်ဆီးခြင်း နှင့် လုယက်ခြင်းများ ကျူးလွန်နေကြောင်း ဒေသခံများက သတင်းပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း အမှတ် (၄) နယ်မြေ၊ စခန်း အမှတ် (၂၄) မှ စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး မင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ တူလာတူလီ တောင်ရွာ၊ တူလာတူလီ ကျွန်းရွာ၊ အလယ်ရွာ နှင့် ဂူးနားရွာထဲသို့ စီးဝင်ပြီး ကျေးရွာကို ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို ရွာရှိ စာသင်ကျောင်း၌ စုဝေးထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၎င်းကျေးရွာမှ အပြစ်မဲ့ ကျေးရွာသားများကို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနှင့် ဆက်နွယ်မှု ရှိတယ်လို့ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြီး နေအိမ် (၃) လုံးကို လုံးဝ ပြိုကွဲ ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ရွှေငွေများကိုလည်း လုယက်ယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆက်သွယ်ပြောပြပါတယ်။ စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က နေအိမ်များကို ရွာသားများအား ဖြိုဖျက်ခိုင်းသဖြင့် ပြိုကွဲနေစဉ် ရွာသားအချို့ ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အလားတူ ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်လည်း စစ်သားနှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက ဘဂုံးနားကျေးရွာအုပ်စု၊ နူရူလ္လာရွာကို ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့လိုက်ကြောင်းနှင့် စံပယ်ကုံးကျေးရွာနှင့် ဒူးတန်းကျေးရွာကြားရှိ လမ်းများတွင် တွေ့သမျှ ရိုဟင်ဂျာများကို ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်စီးသမားများကို စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေသခံများက R-vision သို့ဆက်သွယ်ပြောပြပါတယ်။
ဆက်လက်၍ ဒီကနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် မျောတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ရွာနှင့် တောင်ရွာမှ ကလေးငယ်များ အပါအဝင် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးအားလုံးကို နေအိမ်များမှ နှင်ထုတ်ပြီး ရွာရှိ ကျောင်းခြံဝင်းတွင် စုစည်းထားခဲ့ရာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များပါမကျန် ရွာသားအားလုံးကို စုစည်းခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါက ၎င်းတို့အားလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်လည် လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မစုစည်းနိုင်ပါက ထို အမျိုးသမီးများကို ကျောင်းခြံဝင်းထဲမှ လွှတ်မပေးဘဲ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်မယ်လို့ အမျိုးသမီးများအား ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ရွာသားများရဲ့ ပြောကြားချက်များအရ သိရပါတယ်။
စစ်တပ်နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အာရ်ကာန်ဖြိုဖျက် ဖျက်ဆီးခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းရိုဟင်ဂျာရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး
တောင်ဘာဇာဒေသမှ အပြစ်မဲ့ ရိုဟိုင်ဂျာ အရပ်သား ၃၂ ဦးကို မြန်မာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထား
အကြမ်းဖက်မှုများကို အရေးယူရန် အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့က မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်း (၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆)
Tweets by @rvisionburmese
၁၉ ဇူလိုင်မမေ့နိုင် ဗိုလ်ချုပ်စကား မလိုက်နာနိုင် ရေးသူ အောင်အောင် စစ်တွေ အာဇာနည်နေ့ကို မေ့နေသူများသည် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်ဟု ဆိုရမည်ပင်။ ကျွန်တော်တို့၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း သတိရကြသည်။ လေးစားကြည်ညို ကြသည်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဂုဏ်သတင်းကမ္ဘာတည်သရွေ့ သမိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေမည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ သို့သော် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အပေါ်ယံသတိရ လွမ်းဆွတ်ခြင်းကို ထိုခေါင်းဆောင်များအား ကြည်ညိုလေးစားသည်ဟု မခေါ်ပေ။ ထိုခေါင်းဆောင်များ ပြောဆိုမိန့်ကြားခဲ့သည့်အတိုင်း...
အစိုးရသစ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မပြီးဆုံးသည့် အနောက်ဘက် ဇာတ်လမ်း မိုးမိုးကျော် ၊ ဇွန် ၁၃ ရက် Root Investigative Agency – RiA အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်၏ အဖိနှိပ်ခံရဆုံး လူများအား အဘယ်ကြောင့် လျစ်လျူရှုထားပါသနည်း။ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် အသစ်တက်လာသည့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရသည် စနစ်ဟောင်း အာဏာရှင်အစိုးရထက် အနည်းငယ်သာ ပိုကောင်းသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အစိုးရသစ် တက်လာပြီး ရှင်းသွားသည့် ကိစ္စတခုက တိုင်းပြည်၏ တသန်းခန့်သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအပေါ်...
ကြိမ်ချောင်းစာစစ်ဌါနမှ ‪‎ငါးဘာသာ‬ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သော မောင်မောင်မြင့်အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု မောင်တောမြို့နယ်၊ ကြိမ်ချောင်းစာစစ်ဌါနမှ ‪‎ငါးဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သော မောင်မောင်မြင့် (ခ) မိုဟာမဒ် ရာဟဲလ် (ဘ) ဦး ဟာဘီဘုလ္လာ နှင့် (မိ) ဒေါ် နုရ်ဟလီမာအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ‪‎အဆိုပါ ငါးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၏ ဂုဏ်ထူးရ ဘာသာများမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ နှင့်ဇီဝဗေဒတို့ဖြစ်ကြပြီး၊ ခုံနံပါတ်မှာ ဒကခ-၂၃ ဖြစ်သည်။ သူသည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တံဆိပ် ကပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အမှားသည် အမှန်မဖြစ်နိုင်ပါ ရေးသူ – Htin Kyaw NLD အစိုးရသစ်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလုပ်နေတဲ့ National Verification Card ထုတ်ပေးရေး ကိစ္စ ဆိုတာကို အသေအချာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ယခင် အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ညစ်ပတ်စွာလုပ်ကြံချင်တဲ့ ကိစ္စကို အများကြိုက် အန် တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တံဆိပ်လှလှလေးသုံးထုတ်ပိုးပေးလိုက်ပြီး ညာေ ရာင်းဖို့ လုပ်တဲ့ ကိစ္စသက်သက်လို့သာ မြင်ရပါတယ်။ ဆိတ်ခေါင်း...
မြန်မာအစိုးရ၏ လက်တစ်လုံးခြား လှည့်စားလုပ်ကြံမှု ရိုဟင်ဂျာကို ပေးမယ့် အစိမ်းကတ်ဟာ နိုင်ငံသားကတ်မဟုတ်သည်ကို အသိပေးရန်လို (ရောဘတ်အယ်လ်ဟို့စ် ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) ပို့စ် ပြန်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ) ဟိုယခင်အချိန် ၁၉၉၀ ဟိုဖက်ပိုင်း ကာလက ရှိခဲ့ဘူးသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီ နိုင်ငံသား ကတ် အစိမ်းရောင် သုံးခေါက်ချိူးကဒ် များနှင့် ယခု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန် ဦးခင်ရီပြောသော ရိုဟင်ဂျာ များကို ထုတ်ပေးမည်ဆိုသည့် ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကတ် ခေါ်သည့် အစိမ်းရောင် ကတ်ပြားများ...